Fitaovana famonoana afo - Mpanamboatra fitaovana famonoana afo any Shina Mpamatsy, mpamatsy
QXWT50 Rano zavona (Trolley)
Fampiharana Nampiasainy ny haitao aerodinamika mandroso avy amin'ny fampiharana injeniera mikoriana misy fifangaroan'ny ranona / entona hamoronana rafitry ny zavona rano QXW. Trolley Ny fitambaran'ny Basy tena be pitsiny sy ny rafitra famatsiana trolley dia mahatonga ny andian-tsarimihetsika QXW ho safidy azo antoka sy tsara indrindra amin'ny fikirakirana haavo antonony. Ny andian-tsarimihetsika QXW dia vahaolana miady amin'ny afo ho an'ny fitrandrahana arintany, trano fanatobiana entana, atrikasa ary toerana fananganana toerana itehirizana fitaovana mirehitra ...
QXWT35 Ranon-zavona (Trolley)
QXWB-22 Ala Afo Fitaovana finday avo lenta amin'ny alàlan'ny famonoana afo
1.Product dia manasongadina Jet lavitra azo antoka azo antoka Mora entina interface tsara Fikarohana tsotra Fomba fiadiana afo haingana 2.famaritana Herin-motera lasantsy (HP): 1.8 Tsindry miasa (mpa): 5.8 ~ 6.0 Rated flow (L / min): 4.0 Salan'isa 4.0 ( m): 8.0 (atomisation) 12.5 (DC) Volan'ny kitapo rano (L): 22 Fotoana fiasana tsy tapaka isaky ny kitapo rano (min): 90 lanja net (kg): 11.0 refy (mm): 350x280x550 Sehatra fampiharana: Kilasy A , B, C ary afo fandrehitra mivantana. Fifanarahana: kitapo rano miady amin'ny afo 2, te ...
LT-QXWB16 herinaratra kitapom-batsy karazana fitaovana famonoana afo zavona
Fampidirana Ity vokatra ity dia paompy entin'ny motera izay miteraka tsindry sasany amin'ny fikorianan'ny rano. Aorian'ny fifehezana ny tsindry sy ny fikorianan'ny rano dia ampiarahana amin'ny basy spray manokana izay afaka miteraka zavona rano tsara hamonoana ny afo. Ny fitaovana novaina dia omena fiarovana isan-karazany toy ny tsindry sy ny famerana ankehitriny, fiarovana ny tsy fahampian'ny rano, ary ny fampahatsiahivana ambany. Tsy manana sambo fanerena ny rafitra. Mamaha tanteraka ireo loza miafina ...
Rafitra zavona QXWB15Water (Backpacks)
Fampiharana Nampiasainy ny haitao aerodinamika mandroso avy amin'ny fampiharana injeniera mikoriana misy fifangaroan'ny ranona / entona hamoronana rafitry ny zavona rano QXW. Backpacks Izahay manokana amin'ny fampiasana teknolojia zavona rano amin'ny endrika azo entina izay manome fahaiza-manaon'ny mpamono afo manerantany. Ireo vokatra azo entina dia mitondra fihenam-bidy lehibe amin'ny fotoana ihaonana, fidirana tsara kokoa ary famonoana afo mahomby ka manampy amin'ny fanaraha-maso ny afo amin'ny dingana voalohany. Ny Backpack dia ...
Kitapom-batsy QXWB12 Ranon-drongony
Rafitry ny zavona rano rafitra rafitry ny zavona rano Famaritana: Taratasy fiarovana fiarovana EN, CE-EN3 CN Coal Mine; Fanaraha-maso Fanamarinana Fanamarihana Overview Backpack Ranon-dranon'afo dia mora entina amin'ny mpamono afo hiditra amin'ny toerana misy loza. Noho izany dia afaka hanafohezana ny fotoana fanehoan-kevitry ny mpamono afo sy mampihena ny simba ny famaritana ara-teknika Fantsom-pamonoana fitaovana famonoana 12 litatra Fitaovana vy vy fanerena tsindry pression 7 bar 24 tavoahangin-tsolika mpiaro ahy ...
Famonoana herinaratra maina
Toerana fametrahana: Mampiasà fononteny sy hidiny hanamboarana ny baolina famonoana afo amin'ny loza ateraky ny afo. Tontolo iainana azo ampiharina: Ala, trano fanatobiana entana, lakozia, toeram-pivarotana, sambo, fiara ary faritra mora voadona. Toetra enina: 1. Maivana sy mora entina: 1.2Kg fotsiny, ny olona rehetra dia afaka mampiasa azy malalaka. 2. Fandidiana tsotra: Atsipazo fotsiny amin'ny afo ny afo famonoana afo na apetaho amin'ny toerana mora may. Rehefa mifanena amin'ny lelafo misokatra izy dia mety hiteraka ...
Fitaovana famonoana afo zavona mahery vaika finday
1. Famaritana momba ny vokatra famonoana afo amin'ny alàlan'ny rivotra avo lenta dia mety amin'ny ady amin'ny afo amin'ny atrikasa lehibe, toerana ara-barotra, fiarahamonina, gara, tonelina, trano fitehirizana, efitrano milina, toradroa, tetik'asa fananganana sns. Ny fitaovana dia kely volo, mora mihetsika, afaka tonga haingana amin'ny toerana misy afo, ary tsotra sy mora ny fandidiana. Misafidiana motera lasantsy ho loharanom-pahefana, mora ampiasaina sy tazomina, afaka manome herinaratra tsy tapaka. Fahavoa rano avo lenta ...
PZ40Y Trolley karazana mpamorona foam roa sosona
Miorina amin'ny vokatra ● Ny afo dia manondro loza ateraky ny fandoroana tsy voafehy amin'ny fotoana na habakabaka. Ao amin'ny fenitra vaovao, ny afo dia faritana ho fandoroana tsy voafehy amin'ny fotoana na toerana. ● Anisan'ireo karazan-doza rehetra, ny afo dia iray amin'ireo loza lehibe mandrahona indrindra ny filaminam-bahoaka sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Ny fahafahan'ny olombelona mampiasa sy mifehy ny afo dia marika lehibe iray amin'ny fandrosoan'ny sivilizasiôna. Noho izany, ny tantaran'ny fampiasan'ny olombelona ny afo sy ny histo ...
PZ8Y Mpanamboatra sombin-tsolika an-tanana
Name Hand medium medium foam generator Generator PZ8Y Brand Topsky mpanamboatra Jiangsu Topsky Intelligent Technology Co., Ltd. Sary 1. Fampidirana ny vokatra PZ20YS mpamokatra sombin-tsolika an-tànana vita amin'ny tànana vita amin'ny tànana dia manana famonoana afo kokoa sy fahafaha-mitoka-monina. Manakana ny rivotra sy ny rano mirehitra tsy hiditra ao amin'ny faritra may io ambonin'ilay zavatra may io, ary mandaitra kokoa rehefa mampihena ny fifantohana o ...
MPB18 knapsack fitaovana famonoana afo vita amin'ny rivotra
1. Fampidirana ny vokatra Miaraka amin'ny fandrosoana haingana ny fizotran'ny maoderina, dia mihasarotra hatrany ny raharaha afo. Manokana indrindra, ireo orinasan-tsolika dia misedra tranga maro hafa amin'ny fomba famokarana isan'andro. Raha vantany vao misy lozam-pifamoivoizana simika mampidi-doza, dia tampoka, miparitaka haingana ary be dia be ny fahavoazana. , Misy fomba maratra marobe, tsy mora ny mamantatra, sarotra ny famonjena, ary voaloto ny tontolo iainana. Manoloana ny vonjy taitra toy ...